Yakazara Yekutenga Nhungamiro YeSARM SR9009 Kuvaka muviri
/Blog/garari/Yakazara Yekutenga Nhungamiro YeSARM SR9009 Kuvaka muviri
Posted on 10 / 14 / 2019 by 阿斯劳 akanyora garari.
1.I chii SR9009?
SR9009 kana stenabolic ndeyeCAS 1379686-29-9 yekuwedzera iyo inoteedzera mhedzisiro yemitambo ye Cardio. Kwete chete icho chinodhaka chinokubatsira iwe kudzikisira pasi mamwe emafuta ako emuviri akawandisa, asi zvakare ichawedzera kusimba kwako uku uchisimudzira kutsungirira.
SR9009 inzvimbo yekugadzira, yakavapo kuburikidza neWits yaProfesa Thomas Burris. Izvo zvine hukama ne SARMS (Sarudza Androgen Receptor Modulators), asi zvinokonzeresa kune Rev-Erbα protein inowanikwa mushepa yemasumbu, adipose tishu, huropi, uye chiropa.
Muzvinafundo Burris akauya nazvo SR9009 (1379686-29-9), ichikarira kudzidza uye kunzwisisa iyo circadian rwiyo.
2.How Inoshanda Sei seX9009?
Iwe unoziva here kuti kunzwa kwaunowana mushure mekumhanyisa 2km pane treadmill kana kusimudza imwe heavyweights? Zvakanaka, SR9009 kuora kurasikirwa nemishonga ichaita kuti unzwe saizvozvo. Iyo yekuwedzera ine basa mune iyo circadian modulation, lipid mutemo, uye kutonga kwemazinga eglucose.
SR9009 SARM inoita basa rakakosha mukusimudzira kwaRev-Erb. Iyi protein inokanganisa kugona kwemuviri kupisa mafuta akawandisa, shuga, uye yakaipa cholesterol. Naizvozvo, inokwidza nzira yekudzikisa huremu uchivandudza kutsungirira. Kunyangwe dai iwe waive uchirovedza muviri, iwe waizonzwa uine simba uye usina kuneta zvakanyanya zvekuti unogona kuita kwakawanda kurovedza muviri.
Stenabolic inogadzirisa mafuta, lipids, uye shuga. Kana mafuta ekushandisa emuviri akakwana, ipapo pasina mubvunzo uchazowana kuita kwepamusoro. Muchidzidzo chepamberi uchishandisa mamine murine, mbeva dzaive pasi pe SR9009 powder (1379686-30-2) dosage yaigona kumhanya zvakapetwa kaviri kupfuura zvakapfuura. Ichi chidimbu cheuchapupu chinogona kuve chikonzero nei stenabolic yakanyorwa pakati pezvinorambidzwa zvinodhaka mumitambo.
Kana iwe usiri wekurovedza muviri maniac, idzi nhau ndidzo nzeve dzako dziri kuda kunzwa. Stenabolic zvakare inopeta yako metabolic rate iwe uchizorora. Mushure mekudya, muviri wako unowanzo chinja chikafu kuita mafuta. Nekudaro, iyo SR9009 yekuremerwa uremu inowedzera inokwidziridza ipapo ipapo metabolism zvekuti unotanga kupisa mafuta aya ipapo.
Ongororo dzichangobva kuitika dzinoratidza kuti stenabolic inorwisa kenza mumiriri. SR9009 cancer antagonist inobata oncogenic driver, kusanganisira PIK3CA, HRAS, uye BRAF. Mumaseru ane kukuvadza, chigadzirwa chinotora apoptosis uye chinokanganisa tumor kukura pasina kukonzera zvakaipa.
3.How to Use SR9009
Kunze kwekushandiswa kweshoko reSR9009 tsandanyama kuwana mushonga, iyo yekuwedzera ine akakosha ekurapa maitiro. Makiriniki anokurudzira zvikuru kune varwere vane chirwere cheshuga uye vanhu avo vanogona kubatwa nesitiroko.
Kana iwe uchironga kupa SR9009 poda (1379686-30-2) yekugadzirisa yako chirwere, ita chokwadi chekutaura nachiremba wako zvisati zvaitika. Mushonga uyu wakachengeteka, asi chiremba wako anofanirwa kukuyambira nezve iyo iripo mishonga panguva yekutarisa chero zvakaipa zviratidzo.
Nezvese label yekushandisa, yakajairwa SR9009 dosage inenge iri 30mg / zuva. Door racho rakakamurwa kuita matatu.
Kana iwe uri mushure mekutsungirira, iwe unofanirwa kutora iyo yekuwedzera nguva pfupi isati yarova kurovedza muviri. Icho chikonzero ndechekuti SR9009 ine hafu yepfu-hupenyu; saka, mhedzisiro yacho inoratidzika mumoto. Nechepfungwa, chiise pamberi pekudya kuitira kuti iwe ugone kuchengetedza metabolism inoshanda zuva rese.
4.Benefits of SR9009, Unotarisira Chii?
Kurudzira Kurera Uremu
SR9009 SARM inovandudza metabolic maitiro. Kamwe kumedza kunoitika, stenabolic yaizoronga muviri kuti upise macalorie akawandisa pane kuashandura kuita mafuta. Kwete chete iyo yekuwedzera inowedzeredza mafuta-ekuchengetedza magene, asi zvakare inoderedza kugadzirwa kwemafuta matsva masero muchiropa.
Kana chinangwa chako chiri chekurasikirwa nehuremu, ita shuwa kuti unosanganisira zviitiko zvemuviri mumaitiro ako. Kushanda kunze, kudya, uye kutora SR9009 pre Workout yekuwedzera inowedzera kukurisa kupisa kwemafuta akawandisa. Tsvagiridzo inoratidza kuti kushandisa stenabolic kudzikisira iyo fatty acid uye plasma triglycerides kusungwa ne23% uye 12%, zvichiteerana.
Mune zviitiko zvakakurisa apo kushanda kunze kana kudya hakusisiri sarudzo, vanachiremba vangangonyanya kukupa ichi chinowedzera.
Kufunga kuburikidza neyevatengi ongororo, mumwe mushandisi akasimbisa kuti SR9009 poda (1379686-30-2) yakamubatsira kusiya 17 mapaundi mumwedzi mitatu.
Izvi zvinowedzera kwete chete zvinowedzera mhasuru asi zvakare zvinowedzera simba rayo uye mashandiro. Kunzwa iwe kwaunowana mushure mekupa iyo SR9009 muyero wakaenzana neiyo yekusimudzira uremu.
Mushonga uyu unomutsa kugadzirwa kwakakura kwemamochondria mukati memasero emutsipa, nekudaro inowedzera metabolism. Aya ma organelles ane mutoro wekugadzira simba mune masumbu tishu. Kunze kwezvo, pachave nekuwedzera kwekushandiswa kweglucose uye kudyiwa kwemafuta mukati memasuru.
Kiriniki, SR9009 inobatsira vakweguru vanotambura nekushomeka kwemhasuru kana sarcopenia.
Vazhinji vanoita zvekurovedza muviri havangarasikirwe nekusanganisa iyo SR9009 mhasuru kuwana mushonga mune yavo yekuvaka muviri regimen Iwe unosimudza zviyereso, mhanyisa treadmill, kana kuita chero ipi yekurovedza muviri usinganzwi kuneta kana kureruka musoro.
Iyo yekuwedzera iyo pasina mubvunzo inotora yako yekuita notch yakakwira kupfuura zvayaive pakutanga. Kana iwe waifunga kuti idzi SR9009 mabhenefiti yaive chitsotsi, iwe ungangodaro unonetseka kuti nei anti-doping agency ichirambidza zvakasimba kushandiswa kwayo mumakwikwi emitambo.
Sekutaura kwaThomas Burris, muvambi weStenabolic, mushonga uyu unoshandura iwe kuva mumhanyi ane ruzivo munguva yekuperesa kwenguva. Hauzopererwa nesimba kana simba kunyangwe paunenge uchiita maekisesaizi akawandisa.
Kana iwe uchigara wakatsiga mukati mezuva, stenabolic inogona kunge iri yako inotevera mushonga. Mukudzidza preclinical, chinowedzera chakaratidzika kushandura maitiro ekurara emhando dzemurineti. Masayendisiti akaona kuti mbeva idzi dzaive dzakangwaririra mukati mezuva, uye hapana kana imwe yadzo yaigona kukotsira kwazvo. Nekudaro, kana iwe uchida kubheka kupinda mukati mako circadian ridhi kushandura maitiro ako ekurara, SR9009 ichafara kuzviita.
Kutenda kune ipfupi SR9009 hafu yeupenyu, iyo yekumuka mhedzisiro ichave yenguva pfupi. Naizvozvo, iwe unenge usiri kushaya hope kuzuva rese.
Tissue Kukuvadza (Fibrosis)
Tsvagiridzo inovimbisa kuti makonzo ane chiropa fibrosis akapora zvizere mushure mekutora SR9009 kwemavhiki maviri.
Inodzivirira kubva kuChirwere cheMwoyo
Muchiitiko icho mwoyo unowedzera zvisingaenzaniswi, SR9009 poda (1379686-30-2) inoshanda kudzoreredza anomaly nekudzikisa kukura kwesvikiro uye uremu. Kana dzimwe makonzo aine maartery akaomeswa akarapwa stenabolic, vatsvaguri vakaona kuderera kwehukuru hwemaronda emidziyo yeropa mushure memavhiki manomwe.
Vamwe vashandisi vanoreurura kuti chinowedzera chakakoshesa kuderedza kweropa.
Inoderedza Ropa Cholesterol
Kana iwe wakakora, mikana ndeyekuti yako cholesterol yakawanda yakakwira. SR9009 ichagura kusvika pa47% yeLDL, nekudaro ichiita kuti Workout yako iwedzere kubereka. Iwe unofanirwa kuziva kuti iyo yekuwedzera haina kukanganisa mazinga eHDL.
Rev-Erbs inoita basa rakakosha mukugadzirisa kuzvimba uye kukuvara mukati meCNS. SR9009 inomutsidzira Rev-Erbcy nyukiliya receptors, iyo ine inopesana nekuzvidzivirira mhedzisiro.
Mushonga unodzvinyirira kugadzirwa kwemamolekyulu anokanganisa akadai seCCL2, MMP-9, uye TNF-α. Sezvo kukuvara kwetsipa uye kusapindirana kusingaperi kuri pacogenic zvinhu, masayendisiti ari kudzidza tarisiro yeiyo SR9009 cancer antagonist mune oncogene-indened senescence.
SR9009 inoderedza kunetseka mune mice modhi.
Kana iwe uine trypanophobia, pane imwe nhau dzakanaka kwauri. Zvakanaka, SR9009 inowanikwa yekutungamira kwemuromo. Hapachina maronda majekiseni, sezvazvakaita nemishonga yakawanda inopisa mafuta.
5.Half Hupenyu hweSR9009
SR9009 hafu yeupenyu ipfupi semaawa mana. Neichi chikonzero, iwe unofanirwa kupatsanura dosi yako panguva dzemaawa mana kuti udzikise kuwanikwa kwechirwere muropa.
6.SR9009 Dosage uye cycling
SR9009 dosage mahinji pazvinhu zvishoma. Ndokunge, izvo iwe zvaunoda kuzadzisa uye kuti urikubatanidza zvimwe zvinowedzeredza mukutenderera kwako. Kunze kwezvo, huwandu hwenyorero zvakare huri pasi pekuti muviri wako unoita sei.
Wepakati dosage ndeye 30mg pazuva, iyo yaunogona kukamura kuita matatu akasiyana dosi. Chaizvoizvo, uyu mushonga unoreva kuti iwe unofanirwa kutora piritsi usati watora chero ako matatu ekudya echikamu. Pane kudaro, iwe unogona kushandisa iyo yekuwedzera mushure memaawa mana.
Nguva zhinji, kupatsanura iyo SR9009 poda (1379686-30-2) pre Workout dose inogona kuva inonetsa zvakanyanya, kunyanya kune vashandisi vasinganeti. Ndiani anogona kana kutora mushonga panguva dzemaawa mana pasina kuita kukakavara? Nekudaro, kana iwe usiri kugadzikana neiyi dosing chirongwa, unogona kusarudza kuishandisa iyo awa usati waita zvemuviri.
YeSR9009 kutenderera inofamba pakati pemasvondo masere kusvika gumi nemaviri. Sezvo paine tarisiro yekushivirira kune mushonga, iyo yakakodzera kutora 8-vhiki kubva.
Mushonga uyu haukanganisa chiropa kana itsvo. Nekudaro, unogona kuchengetedza nhengo idzi nekuisa zvimwe zvakakosha zvekudzivirira zvakadai seN2Guard muchikamu chako cheSR9009.
7.Do Iwe Unoda PCT yeSR9009?
Kusiyana nezvimwe zvinowedzera, stenabolic haidi PCT (Post Cycle Therapy) sezvo mushonga usingakanganise nehuwandu hwe Testosterone.
8.Ingangoita Adhiri Side Mhedzisiro uye Njodzi yeSR9009 Kushandiswa
Zviratidzo zviri pamusoro izvi zvichanyanya kukanganisa kutanga. Kamwe muviri wako unokonzeresa kune iyo yekuwedzera, zviratidzo zvinopera. Nekudaro, kana SR9009 mhedzisiro Kunyanya kunetseka, iwe unofanirwa kuisiya uye utaure nachiremba wako.
SR9009 inogona kuve yakawedzera mamiriro evarume vane low lowido kana erectile dysfunctions. Dzimwe nguva, iyo yekuwedzera inotungamira kune yakaderera testosterone mazinga.
Stenabolic haisi steroid. Naizvozvo, kuitora hakuzovhiringidze iyo hormonal system. Matanho ako e testosterone haazodonhe, uye kana mushonga wacho haugadzike muestrogen. Kune vakadzi, iyo yekuwedzera haigone kuita zvisina kujairika kuenda kumwedzi.
9.Stacking SR9009 ine imwe SARM
Kugadzika SR9009 na Ostarine (MK-2866) inowana zvinoshamisa mhedzisiro, kunyanya kune chikamu chekudzokorora.
Ostarine, iri yega, iri SARM yakanaka kwazvo kune ese ari maviri bulking uye yekucheka magetsi. Nekudaro, kana iwe uchida kutsungirira kwakanyanya, iwe unofanirwa kuitisa neRR9009. Paunenge uri pane stack, simbisa kushandisa 25mg ye ostarine zuva nezuva. Kune stenabolic, 10mg ichashanda, asi iwe unofanirwa kuitora kana wave kuda kurova nzvimbo yekusimba.
SR9009 uye GW501516 (Cardarine) iva nepedyo kufanana. Dzimwe fundo dzinopokana kuti idzi mbiri macomputer dzinosungira kune iwo ma receptors akafanana.
Sezvaunenge uchitoziva, stenabolic ine inokurumidza hafu yeupenyu, iyo isingazokugarisa iwe zuva rese. Kupesana, kadhiarini's bioavailability inosvika kumaawa makumi maviri nemana. Iko kusanganiswa kweaya maviri kunoguma ne 24/24 mhedzisiro.
Kana iwe uri kushandisa SR9009 padhuze neGW501516, iwe unofanirwa kufunga nezve zvekare seyakafanowedzerwa-pre-Workout. Kuti ureve, iwe unongofanirwa kupa stenabolic pamazuva auri kushanda kunze.
Paunenge uri pasuru yeSR9009, iyo muyero unongova 10mg, iyo yaunofanira kutora nguva pfupi usati washanda kunze. Kune GW501516, yakanakira kunyorerwa ndeye 20mg / zuva, iro raunofanirwa kupa nechikafu chako chamangwanani.
SR9009 yekutengesa inonyanya kuringa vavaki vemuviri vari mushure mekutsungirira, kuwedzera kwekuita kwemuviri, kukurumidza kupora kubva mukushanda kunze uye kuvaka-kwemasuru emarara.
Kubva pane dzakasiyana-siyana online wongororo, vashandisi vanotaura kuti iyo inowedzera yakatsungirira kutsungirira sezvo vaigona kuita kwakanyanya kurovedzera vasina kunzwa kuneta. Kune vamwe, kuwedzera kwekusimba uye kuwedzera simba kwesimba kwanga kuri padanho rakakwira nekukurumidza mushure mekufambisa SR9009 poda (1379686-30-2).
Padivi rakashata, vamwe vashandisi vaisakwanisa kuisa dumbu nguva zhinji kwemaawa mana. Nekudaro, avo vanoshandisa SR9009 stacks havana kuwana ichi kuve chinoshungurudza sezvo ivo chete vaifanira kutora iyo yekuwedzera ivo vachinanga kumitambo yekurovedza.
Vatengi vashoma vakabvuma kuti stenabolic haina kuvaita kuti vanzwe zvakawanda. Kunze kwekushaya hope, hapana mumwe airatidzika kunge akanyoresa kusangana nehuremu hweSR9009.
11.Is SR9009 Bioavava?
Pakave nekufungidzira kuti SR9009 ine zero bioavailability, kunyanya pamuromo manejimendi. Nekudaro, ini ndinogona kuramba nechivimbo izvi nekuti kana iyo yekuwedzera isiri kuwanikwa, saka panogona kunge pasina mhedzisiro yakanaka SR9009 pamuviri wemunhu.
12.Where to Buy SR9009
Vatengesi vasingaverengeki vari kuisa kumusoro kweSS9009 yekutengesa. Kunyangwe zvitoro zvepamhepo zviri nzvimbo yakakodzera kutenga chadzinowedzera, iwe unofanirwa kuve wakangwarira kuti usabate mari yekubiridzira zvigadzirwa zvekunyepedzera.
Kana iwe uchida munhu-giredhi stenabolic, uwane kubva kune anoremekedzwa mutengesi. Unogona kuita odha na AASraw.
13.SR9009 Yokuvaka Muviri
SR9009 powder (1379686-30-2) yakanyura muindasitiri inovaka muviri apo tsvakiridzo yakaratidza kuti hukasha hwakaita kuti mbeva dzive nemhasuru dzakatsiga. Kunze kwezvo, ivo vaive vakasimba, vachiratidzira kugona kwakanaka kwemuviri, uye vaive nekutsamwa kupfuura kare.
Vagadziri vemuviri vari mushure mekukwazisa kana kucheka vanozobatsirika zvizere kubva ku SR9009. Mumamiriro ezvinhu apo iwe unofanirwa kudzidzisa zvakanyanya, mushonga unowedzera yako yakanyanya kurova kwemoyo, nekudaro uchiremekedza hurema uye kupera simba. Uyezve, SR9009 yekuvaka muviri inowedzera inoderedza kuzvimba uye kukuvara kumatishu kuitira kuti maitiro ekudzosa akurumidze kuitika.
SR9009 inovaka muviri inowedzera inoshanda pakuita basa. Zvirinani, pane akakwana mhedzisiro miedzo yekutsigira iyi chokwadi uye isingaverengeki yakanaka yekushandisa vashandisi yezvakagadzirwa.
Nekudaro, kugona kwemushonga uyu kwave kuri pfupa rekukakavara pakati pesainzi nevatsvagiri uye vesaenzi zvakanyanya. Semuenzaniso, pave paine anecdotes ekuti SR9009 yemuromo bioavailability iri zero. Zvakanaka, ini handidi kuita mutsigiri wadhiyabhorosi, asi 95% yevanoshandisa stenabolic vanotsigira kushanda kwayo. Kunze kwezvo, iwe unofanirwa kuve uchibvunza kuti nei anti-doping masangano angave nehutano hwekurambidza kushandiswa kwawo mumitambo kana chinhu chacho chisingaite.
Ziva kuti SR9009 mhedzisiro inoonekwa-paunoshanda kunze nguva dzose uchidya zvine hutano. Dzivisa kudya kwemafuta, makoriyori, uye svinura kubva pakuputa uye kunwa.
Cho, H., Zhao, X. et al. (2012). Mutemo weS Circadian Behaeve uye Metabolism naRENV-ERBα uye REV-ERBβ. Gene Expression Laborator, Salk Institute yeBiological Study.
Morioka, N., Zhang, FF, Tomori, M., Hisaoka-Nakashima, K., Saeki, M., uye Nakata, Y. (2016). Kukurudzira kweNuclear Receptor REV-ERBs Kunotungamira Tumor Necrosis Factor-Yakaratidza Kuratidzwa kwePro-Kufuridzira Mamorekuru muC6 Astroglial Cell.
Dzimba, PG, Brandon-Warner, E., et al. (2016). Rev-Erb Agonist uye TGF-β Nenzira imwechete Inobata Autophagy asi Zvakasiyana Inotonga Hepatic Stellate Cell Fibrogenic Phenotype. Int J Biochem Cell Biol.
Dodson, B. (2013). Nyowani Dhivha Zvinotevedzera Zvakanakira Migumisiro Yekurovedza muviri. Utano Nehupfumi.
Woldt, E., Sebti, Y. Et al. (2013). Rev-Erbα Modulates Skeletal Muscle Oxidative Kugona nekugadzirisa Mitochondrial Biogeneis uye Autophagy. Chinyorwa che Natural Natural Medicine.
Sulli, G., Rommel, A., et al. (2018). Pharmacological activation ye REV-ERBs ndeye Lethal muCancer uye Oncogene-Yakaiswa Senescence. Zvisikwa (Yemukati Renyaya yeSainzi).
Iko kusanzwisisika kusanzwisisika mune anabolic steroid yenyika	Zvese nezve Oxandrolone (Anavar), unofanirwa kuziva